မယ့်ကိုး: အမေ့သမီး၊အမေ့သားများသို့ မရည်ရွယ်သော…
စာရေးသူ မယ့်ကိုး at 6/18/2011 09:36:00 PM
sis, there are some parents who don't love their children. This is the truth. I've seen with my own eyes the father who don't love his children and treat badly. So, it's not always right that theory about parents ALWAYS love their children. My personal view is NO.
I wish and hope that you'll be happy and fine.
18/6/11 10:10 PM
HI sis, I love my mom very much and my mom love me too. But I can understand your feeling and your suffer.If I met that kind of mom, I will surely suffer and effect same as u. I really thank you for your novel that guide how parent should treat to their child and what is pro and con. Bravo sis.I like you very much.
18/6/11 11:19 PM
မိဘတိုင်းဟာ သားသမီးတိုင်းကို မချစ်ပါဘူး။ ဒီတော့ သားသမီးတိုင်းဟာလည်း မိဘတိုင်းကို မချစ်ဘူး။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အများကြီး တွေ့ခဲ့ဖူးပါတယ်..။ ဒါလဲ အခြေအနေအမျိုးမျိုး၊ အကြောင်းခြင်းရာအထွေထွေကြောင့်ဖြစ်ကြရတယ်။ အရင်စာတွေ တောက်လျှောက်ဖတ်ခဲ့သမျှ comment မရေးဖြစ်ပေမယ့်.. ခုတော့.. သူ့ရဲ့ abuse လုပ်လာတဲ့ အဖေကို နာကျည်းမုန်းတီးလွန်းတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို အမှတ်ရပြီး ရေးဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ချို့မိဘတွေလည်း abuse နဲ့ discipline ကို ခွဲခြားဖို့ရာ knowledge မပြည့်ခဲ့တာတွေကြောင့်လည်း မယ်ကိုးပြောတဲ့.. လွှမ်းမိုး၊လျစ်လျူ၊ ၀င့်ဝါ၊ ထင်ရှား၊ ဆေးဝါး၊ ခံစား၊ ရက်စက် .. တဲ့ အမေနဲ့အဖေ တွေ ... ဒါမျိုးအဖြစ်တွေ ဖြစ်ခဲ့ရတာလည်း ရှိတယ်။
18/6/11 11:23 PM
မှတ်ချက်လေးတွေ ပေးသွားတဲ့ မမီးငယ်နဲ့ မjewel ကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မရဲ့ အမေစာစုဟာ အမေကို အပြစ်ဖို့မုန်းတီးကြောင်းရေးတဲ့ စာမဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်ဒဏ်ရာရနေတဲ့သမီးတွေအတွက် ရေးခဲ့တာပါ။ (ဒါပေမယ့် အဆုံးအထိမရေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး) အခုဒီဆောင်းပါးမှာတော့ ပြောချင်တာလေးတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရေးလိုက်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ending the legacy ဆိုတဲ့ စာပိုဒ်မှာပါ။ အဓိကက ( Deal with your mother inadifferent,healthy manner) ဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
စာရေးသူရဲ့ ကုထုံးက တစ်မျိုးဖြစ်နေပမယ့် ကျွန်မက healthy manner ဆိုတဲ့အသုံးလေးကိုတော့ သဘောကျပါတယ်။ မြန်မာလို ဗြဟ္မစိုရ်စိတ်ထားမှပဲ ဆက်ဆံရေးအားလုံးဟာ ချောမွေ့လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်မယုံကြည်လို့ပါ ။
အခုလို အချိန်ပေး မှတ်ချက်ပေးခဲ့တဲ့အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်း ထပ်ပြောပါရစေရှင်း)
19/6/11 12:17 AM
ပို့စ်ကို ဖတ်ပြီး မယ်ကိုးရဲ့ ခံစားချက်ကို စာနာခံစားရင်း အခုအချိန်မှာ ကိုယ်တိုင်ကမိဘနေရာ ရောက်နေတော့ ကိုယ့်မီးမီးသာ မယ်ကိုးလိုလေးဖြစ်နေရင် (မယ်ကိုးလို ခံစားနေသူလေး ဖြစ်မယ်ဆိုရင်) ငါဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲလို့ တွေးပြီး အတွေးတွေဝေ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။
အရင်က သိပ်နားမလည်ပေမယ့် စိတ်ပညာတွေ ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်း မိဘမေတ္တာငတ်ရလို့ တသက်လုံး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မလုံခြုံမှုတွေ ခံစားသွားရတဲ့ သားသမီးတွေ အကြောင်း ပိုပိုနားလည်လာတယ်။
အခုလည်း.. ဘယ်လိုပြောရမလဲ.. တစ်ခုခုဆို တစ်ယောက်တည်း ၀မ်းနည်းကြေကွဲမနေပဲ အစ်မဆီ ရင်ဖွင့်တိုင်ပင်ပါလို့..နော်။
19/6/11 10:15 PM
အရမ်းကြီးလည်း မခံစားနေနဲ့လေ၊ တချို့ကိစ္စများဟာ အချိန်က ကုစားလေ့ရှိတယ်၊ အခန့်မသင့်ရင် လူတိုင်း အဲလို ဖြစ်ကျတယ်ဗျ၊ အဆင်ပြေသွားပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
21/6/11 2:06 AM
ဒီစာကို ဖတ်ပြီး မယ်နဲ့ ထပ်တူမဟုတ်တောင် အနီးစပ်ဆုံး လိုက်ပါ ခံစားခဲ့ပါတယ်... မယ် စိတ်သက်သာရာရအောင် ပြောတာမဟုတ်ပေမယ့် (သားတယောက်ရဲ့ အမေ အနေနဲ့) သားသမီးကို မချစ်တဲ့ အမေ မျိုး မရှိလောက်ပါဘူးလို့ ပြောချင်ပါတယ်... ပြီးတော့ မြတ်စွာဘုရားတောင်မှ အမေ့ကျေးဇူးကို နို့တလုံးဖိုးပဲ ကျေခဲ့တယ် ဆိုတော့ မိခင်မေတ္တာဆိုတာ ဘယ်လောက်ကြီးမလဲ... ညီမလေး မှန်းလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်...
Aki Ross said...
ဒီနေ့ပထမဆုံး မယ့် blog ကိုဖတ်မိတာပါ။ ဒီ post ကိုဖတ်နေရင်း ဖတ်နေရင်း မယ့် ကိုတခုခုပြောချင်လာတယ်။ ဒါမဲ့ ပြောလည်းမပြောတတ်ဘူး တခုခုပဲ ရင်ထဲမှာဆို့လာတယ်။ ကျွန်မလည်း မယ့်လို ကလေးတယောက်ပါ။
မယ်, မိဘနဲ့ ပတ်သက်လို့မှမဟုတ်ဘူးနော်။ စိတ်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးလည်း ပြန်ကြိုးစားလို့ရသေးတယ်.. စိတ်မလျော့လိုက်နဲ့ မယ်။ အဆိုးတွေချည်းမဟုတ်ဘူး။ ဟုတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆို သက်သေက ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ။ ငါတောင်ရှိနေသေးတာ ငါလိုလူတွေရှိကိုရှိမယ် လို့။ နော်..။ အဆုံးစွန်ဆုံး ငါ့ကို ထိခိုက်ခဲ့ကြပြီဆိုရင်တောင် ငါလို တခြားတယောက် မထိခိုက်စေရဘူးလို့..။ အဲ့ဒီစိတ်လေးတွေဆက်လာတဲ့အခါ မယ် စိတ်ချမ်းသာလာမှာ။း)
Peace May Upon You.. Mae Coe.. :)
24/6/11 11:54 PM
dear 'mae koe'
i so much want to comfort u but fall short of words. not all, but most mothers have ' mother's love' as described even by buddha in his 'metta thoke'. there are many mothers , even so, nowadays, who have and may lack 'mother's love and responsibility. please try to move forward with 'dhamma', as it is the only WAY to liberate from all sufferrings. with metta KTM.
25/6/11 5:02 PM
အစ်မ ပြောသလိုပဲ ကိုယ့်ကို မချစ်ဘူး ပဲ ထင်နေတယ်။ စိတ်ထင်တာပဲ ဖြစ်မှာပါလို့ အမြဲတမ်းတွေးပြီး ဖြေတတ်နေပြီ မရေ...။ အားပေးနေမယ်နော်။
28/6/11 7:44 PM
သားသမီးကို လုံးဝမချစ်တဲ့ မိဘတွေတော့ရှိချင်မှရှိနေနိုင်ပေမဲ့ မိဘတိုင်းကတော့ သားသမီးတိုင်းကို ချစ်ချင်းမေတ္တ္တ္တာ အပြည့်အ၀ပေးချင်မှပေးပါလိမ့်မယ်။
မိဘတိုင်းက သားသမီးတွေကို အတူတူချစ်တယ်ဆိုတဲ့ သီအိုရီကို လုံးအ၀ အယုံအကြည်မရှိပါဘူး။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်ကိုယ်တွေ့မို့ ပါ။
မယ်ကိုးရဲ့ အဖြစ်အပျက်အရ မယ်ကိုးက အမေနဲ့အဝေးမှာနေရတာ တော်သေးတယ်လို့မဆိုလိုပေမဲ့ မိခင်နဲ့ အတူနေရပြီး မိခင်က အခြားသားချင်းတွေကို မေတ္တ္တ္တာအပြည့်အ၀ပေးပြီး သမီးတစ်ယောက်တည်းကိုသာ ကွက်ချန်ခဲ့တဲ့ သမီးတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်ကို တွေ့ဖူးမြင်ဖူး ထပ်တူနီးပါးခံစားခဲ့ရဖူးပါတယ်။ သူ့ခများ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ အသေးအဖွဲလေးက အစခံစားခဲ့ရတာမို့ သူ့ဘ၀ကို ကျွန်မဖြင့် စိတ်မကောင်းလို့မဆုံးပါဘူး။
ဒီအကြောင်းအရာကို မြန်မာအမျိုးသမီးတော်တော်များများက နှုတ်ထွက်ပြောဆိုဖို့အတော်တော်ခဲယဉ်းနေကြပါတယ်။ မိဘဆိုတာက ကျေးဇူးကြီးတယ်၊ မှားမှားမှန်မှန် မဝေဖန်ရဘူးဆိုတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကနေ ကျွန်မတို့တတွေကြီးပြင်းလာရတာ မဟုတ်လား။
ပျို့လက်ဟန်ရဲ့ နှင်းခွဲမီး ဖတ်ဖူးလာတော့မသိဘူး။ အမေတွေရဲ့ မတူညီတဲ့ အုပ်ထိန်းမှုအောက်မှာ ကြီးလာတဲ့ ကောင်မလေးနှစ်ယောက်အကြောင်းကိုပေါ့၊ ဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေကို ထုပ်ဖော်ရေးတဲ့သူတွေကို အများကြီးလေးစားပါတယ်။ နောက်ထပ်များများရေးနိုင်ပါစေ။
29/6/11 8:22 PM
9/7/11 5:01 PM
Mae Coe yay,
I know your feeling even I got my Mum love & understanding to me. I accept what you write in this article and wanna say you "Bravo" for mentioning feeling(on the other hand, release the pain) ... I have seen like this kind of girl in my life, she is not like you. You can communicate in this surrounding very nice (even though you have this kind of feeling) and people love you. But she cant communicate with people very well, she always try to hide her real emotion, she is so sensitive in everything and she care of every manner of others to her (but not in positive thinking)... and most of the people dont like her. She feel like her Mum dont love her well...but she also dont treat and care her (heartily) ... So & So ...
But, you are very nice, you know yourself / your feeling and you face this in right way. I do appreciate of you. I impress the people who can face the truth. Wish you all the best in future...
I am always your reader :)
3/8/11 11:06 AM
Ma Ma Latharnya, Ako Aung, Ma Ma Thet Wai,Sis Aki Ross, Ko KTM, Ma May Lay, Ko/Ma Anonymous, Ko Ba Kyine, Sis Orange Chit Thu....
My Dear Orange Chit Thu....
I'm so thankful for your story. Actually she and I have similar personalities .Although I'm trying my best to fact the truth, I'm still hurt to say that.
Yes, I hope u would remember the post u commented. :) “ အသင်ရဲ့ မချစ်မနှစ်သော”
ှုI'll always thank your kind words and time, dear :)
3/8/11 7:41 PM
"အတိတ်ကံ"၊ "ကံတရားအကြောင်းကို ..."၊ "ကံတရားပဲလေ။"၊ ကံ ကို ကျနော်တို့ လူမျိုးများ ရေလဲ သုံးကြတယ်။ အမြင်မကျယ်ရာ ရောက်သည်ဟု ရှုမြင်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓတရားတော်မှာလည်း ယင်းသို့ ရေလဲ သုံးရန် ညွှန်းဆိုမည် မဟုတ်ပါ။ အဲဒီထဲက မမယ်ကိုးနဲ့ ဆွေးနွေးတဲ့ ညီမလေး အမြင်မကျယ်မှုကို စိတ်မကောင်းစွာ ထပ်တွေ့ရသည်။ ငါမခံစားဘူးတော့၊ ဒါမဖြစ်နိုင်ဟု အချို့သူများ ပိုင်းဖြတ်တတ်သည်။ နောက် ဒီလို စက်ဆုတ်စရာ အကြောင်း မကြားချင်တော့၊ မရေးပါနဲ့တော့လို့ တိုက်တွန်းတတ်သည် အဓိကကတော့ ထိုသို့သူများ အဖြစ်မှန်ကို လက်ခံရန် အားနည်းသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ သည့်အတွက်တော့ မဖတ်ပါနဲ့တော့ လိုသာ ပြောလိုက်ပါ။ အခုလို စာနဲ့ပေနဲ့ ရှင်းပြလည်း နဂိုအစွဲနှင့် ပိုဝေးအုံးမည်ပင်။
7/8/11 12:13 AM
မိဘတိုင်းသားသမီးကို ချစ်ကြတာပဲဆိုတဲ့စကားကို ယေဘူယျ သဘောတော့ လက်ခံပါတယ်. ဒါပေမဲ့ ချွင်းချက်မရှိတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
လမ်းပေါ်မှာ လမ်းဘေးအိမ်သာထဲမှာ စွန့်ပစ်ခံရရှာတဲ့ ကလေးတွေ တိုင်းပြည်တော်တော်များများမှာ ရှိနေတာ အားလုံးအသိပါပဲ။ ဒါက အလွယ်ကူဆုံး ဥပမာ တခုကို ပြောပြတာပါ. ဒါ့ထက် နက်ရှိုင်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ အများကြီးပါပဲ...ကိုယ်တွေ့မကြုံလို့
မယုံဘူးဆိုတဲ့သူဟာ ဘ၀မှာ ရင့်ကျက်မှု့နဲ့ အတွေ့အကြုံ လိုနေသေးလို့ပဲ ထင်ပါတယ်..
Ohh...I just notice your reply to me..thks Q :)
I like the above two comments, anonymous and moe moe...so realistic...yeah, it is happening in our real life...yes,I agree of this word "နောက် ဒီလို စက်ဆုတ်စရာ အကြောင်း မကြားချင်တော့၊ မရေးပါနဲ့တော့လို့ တိုက်တွန်းတတ်သည် အဓိကကတော့ ထိုသို့သူများ အဖြစ်မှန်ကို လက်ခံရန် အားနည်းသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်" ... so true!
မယ့်စာလေးကို ကျွန်မရဲ့ facebook မှာ ရှဲလိုက်တယ်နော်။ ကျွန်မ မှာ စာအုပ်တအုပ်ရှိတယ်။ Conatance Briscoe ရေးထားတဲ့ Ugly ဆိုတဲ့ စာအုပ်။ သူက သူ့ ဘ၀အကြောင်းကို
ရေးထားတာ။ "UGLY is the life story of Constance Briscoe. Starved, beaten and told she was an "ugly waste of space", this is the heart-rending account ofamother's cruelty form one of the first black women to sit asajudge in the UK" မမယ် ကို ပေးဖတ်ချင်တယ်။ သူဟာ အဲဒီလို အဖိနှိပ်ခံ ဘ၀ကနေ ကြိုးစားလိုက်တာ Barrister ဖြစ်ခဲ့ တယ်။ She was one of the first black women to sit asajudge in the UK. မမယ်ကိုးရေးထားတာတွေဟာ အပြင်မှာ တကယ် ရှိတယ် ဆိုတာကို ၁၀၀% ထောက်ခံပါတယ်။ အမေ ကြောင့် မှမဟုတ် ပါဘူး အမေ မိဘ မရှိတော့ ပဲနဲ့ စိတ်ဒါဏ်ရာ ရတဲ့ ကလေးတိုင်းကို ကြင်ကြင်နာနာနဲ့ ဖေးမ တွဲ ခေါ်နိုင်ရင် ဘယ်လောက်များကောင်းလိမ့် မလဲ။
2/11/11 5:05 PM
ကျမအရွယ်ရောက်လို့သားသမီးတွေရှိလာရင် ကျမရဲ့ကလေးတွေကို ကျမလိုမခံစားစေရဘူးလို့လေ
ကျမမိဘတွေက သားသမီးကို အလွန်အမင်းချုပ်ခြယ်နှိပ်ကွပ်တဲ့သူတွေမဟုတ်ပေမယ့်
မိဘအရိပ်အကဲသိတက်ပြီး သူတို့မျက်နှာအ၇ိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ အကင်းပါးတဲ့သူကို
အဲဒီလိုတွေမလုပ်တက်ပေမယ့် သူတို့အပေါ်မှာ ချစ်ခင်စိတ်ကတော့ တခြားသားသမီးတွေလိုပါပဲဆိုတာကို
ကိုယ်ရဲ့ခံစားချက်တွေကို ရင်ဖွင့်ခွင့်ရှိတဲ့ အဒေါ်တယောက်ရှိခဲ့လို့လဲ ကျမကံကောင်းခဲ့တယ်
ကျမရင်ထဲက အနာကတော့ အမာရွတ်ထင်ကျန်ဆဲပါ
15/4/12 10:41 PM
May be you have heard similar suggestions before. But I would like emphasize again, try to find the other half who have happy family nucleus. I did it and now I haveahappy family of my own. I am leadingasuccessful life. Yes. Pains and suffers are there. Pls try to overcome. Good luck!
25/4/12 4:26 PM
ညီအစ်မနှစ်ယောက်ကို အမေ့အိမ်ထားပြီး ပစ်ထားတဲ့ဆရာဝန်မတစ်ယောက်လို့ပဲ ဇာတ်လမ်းကိုသိထားတယ်..။အဖေအကြောင်းထည့်မရေးတော့ ဘာလို့လဲဆိုတာ မမေးသင့်ဘူးလို့တော့ သိပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် အဖေကိုအပြစ်တင်သံ မကြားရဘူးနော်..။ အဖေကို စိတ်ထဲလုံးလုံးမရှိတာလား..။ အဖေဆီကမေတ္တာကိုတော့ မရလည်းကိစ္စမရှိဘူး ယူဆတာလား...။
မမယ်ကိုးအမေက အဖေကိုမကျေနပ်လို့များ မမယ်ကိုးတို့ကို ပစ်ထားတာလား..။
အမေတွေတိုင်း သားသမီးကိုမေတ္တာကောင်းကောင်းမပေးတတ်ဘူးနော်..။ ကျွန်တော်တို့အမေဆို မေတ္တာမပြတတ်ဘူး..။ အဒေါ်(အမေ့ယောက်မ)ကအမေ့ကိုဘာသာပြန်ပေးတယ်..။ ဒါပေမယ့်အမေ့အမူအရာက သိသာပါတယ်..။ စားဖို့သောက်ဖို့လုံးပန်း..၊ တစ်ခုခုစားစရာဆို သူမစားဘဲ ကျွေးတာတို့..။ အမေ့မေတ္တာပေါ့..။ မမောမပန်း ချက်ပြုတ်တာတို့ပေါ့..။
ဆရာဝန်ဆိုတဲ့ လူတန်းစားကလည်း ပြောရဆိုရအခက်သားကလား..။ ငါ့ဘ၀တက်လမ်းမှာ ဒီကလေးတွေက အနှောင့်အယှက်လို့ တွေးနေတတ်ကြတဲ့ ဆရာဝန်တွေလည်းရှိတာပဲလေ..။ မမယ်ကိုးပြဿနာတွေ ပြေလည်မှာပါ..။ အခုလိုအဖြေရှာရင်းနဲ့ မမယ်ကိုးနဲ့ကိုက်မယ့်အဖြေတွေ့မှာပါ..။ အဖြေရှာတာကောင်းပါတယ်..။ မမယ်ကိုးနဲ့ကိုက်မကိုက်တော့ မသိဘူး..။ ဦးဇောတိကတရားတွေ အားတိုင်းနာပါ့လား..။ တရား ၈၄ ပုဒ်ရှိတယ်..။ တစ်နေ့နာနိုင်သမျှ တစ်ပုဒ်ချင်းနာ..။ ကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေတဲ့အပုဒ်ကို အထပ်ထပ်နာပေါ့..။ ကျွန်တော်အတွက် အဲဒါအကောင်းဆုံးမို့ မမယ်ကိုးကိုအကြံပေးတာပါ..။ မမယ်ကိုးအတွက် အဆင်ပြေမပြေတော့ မမယ်ကိုးလုပ်ကြည့်မှပဲ သိမှာပဲ..။
13/10/12 4:28 AM
စာထဲက ညီမလေးဘာကြောင့်လက်မခံနိုင်တာလဲဆိုတဲ့အချက်ကတော့ ကျနော်တို့ ယဉ်ကျေးမှု တနည်းပြောရရင် မိဘမေတ္တာဖွဲ့စာတွေများတာ ပြီးတော့ မြန်မာလူမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချက် နောက်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခြင်း အဲဒီအချက်တွေရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုတွေကြောင့်လဲ ပါမယ် မယ့်ရဲ့။ ကျနော်လဲ မိဘမေတ္တာကို အပြည့်အ၀ရတဲ့သူပါပဲ။ ဘာ့ကြောင့်ဆိုတော့ ကျနော်က တစ်ဦးတည်းသော သမီးကိုး။ ဒါပေမယ့် ကျနော်က ဂျစ်ကန်ကန်လေ မယ့်။ အကြီးကမှ မှန်တယ် ဘာနေနေ အကြီးပြောတာလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့ အချက်တွေကို လုံးဝလက်မခံနိုင်တဲ့သူ။ ဒါ့ကြောင့်လဲ ကျနော့်မိသားစုမှာ သိပ်အတွန့်တက်တာလို့ အမြဲအပြောခံရတာပေါ့။ ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးနေလို့ အမှားကို အမှန်လို့လက်ခံလိုက်ရမှာမျိုးတော့ ကျနော်မနှစ်မြို့တာအမှန်ပဲ။ အမေ့မေတ္တာ ငတ်မွတ်နေတဲ့ သမီးတွေအကြောင်း ရာနှုန်းပြည့်စာနာပေးနိုင်တယ်လို့တော့ မညာချင်ပေမယ့် အဲလိုတွေရှိတာကိုလဲ လက်ခံတယ်။ ဒီ့ထက်ကံဆိုးတဲ့ သမီးတွေရှိတာကိုလဲ ယုံကြည်တယ်။ ခံစားချက် အထူးသဖြင့် စိတ်ဒဏ်ရာကို ကျနော်ကောင်းကောင်းကြီး ကိုယ်ချင်းစာနိုင်တယ်။ သူတို့တွေရဲ့ဘက်မှာ မယ့်နဲ့ အတူ ကျနော်လဲ ရှိသေးတယ်။